Ziva mhando shanu dzeCreole Potato Iyo Inogona Kutsungirira Kusanaya - Potatoes News
Chidzidzo chakaratidza kuti mhando dzeCreole mbatatisi CCC059, CC103, CCC116, CCC140 uye CCC14, zvine kukwirira kwakanyanya kunetseka kwemvura munguva dzakaoma. Kutsvaga kwacho kunogona kubatsira mukuvandudzwa kwemamwe marudzi, kusimbisa kugadzirwa kwezvirimwa uye kuramba kwavo shanduko yemamiriro ekunze.
Iyo Solanum tuberosum, inonyatso kuzivikanwa seCreole mbatatisi, iri tuber yemhuri yeSolanaceae, iyi mhando inorimwa pa8,787 XNUMX mahekita enharaunda yenyika, kunyanya mumadhipatimendi eAntioquia, Boyacá, Cundinamarca neNariño. Uye chikafu chinoratidzwa cheColombia gastronomy iyo inowedzera kunhuhwirira uye kugadzirwa kune chaiwo madhishi senge ajiaco.
Iyo yekurimwa kweCreole mbatatisi inokura zvinobudirira munzvimbo dzine hunyoro hwakanyanya uye kutonhora kwemamiriro ekunze, zvisinei, nemhedzisiro yeshanduko yemamiriro ekunze, chikafu ichi chinowanzo kuve chinotapurwa zvakanyanya nekuoma mwaka Imwe yematambudziko akatarisana nevarimi vemapepa, semuenzaniso avo vasina madiridziro.
Iyo mbatatisi ndiyo tuber inova chikamu cheiyo yekutanga mhuri dengu reColombia uye inorimwa kunyanya muAndes Region. Sekureva kweBazi rezvekurima nekuvandudzwa kweMaruwa, iwo madhipatimendi eCundinamarca, Boyacá, Nariño neAntioquia, anotarisisa 90% yenzvimbo yakasimwa uye kugadzirwa nematoni anosvika mamirioni 2,782,676 pagore. Sekureva kweColombian Agricultural Research Corporation - AGROSAVIA, kuColombia kune marudzi anopfuura mazana matatu ematapiri echinyakare. Asi kunyangwe hombe bhuku rakakura, Colombian Federation yeVagadziri veMbatatisi - Fedepapa, inovimbisa kuti marudzi gumi nemaviri chete ndiwo anodyiwa, pakati pawo ari: Mbatatisi yeCreole, pastusa, tuquerreña uye diacol capiro.
Kubva 2020 iyo National University - UNAL, yakatungamira mapurojekiti akasiyana siyana pamusoro pekuvandudzwa kwembeu nechinangwa chekugadzira zvinokanganisa kugadzirwa uye mhando yezvigadzirwa zvekurima. Teresa Mosquera Vásquez, magister muPhenotypic Kuongorora kwesangano redzidzo, akaita ongororo yekuona mhando dzeCreole mbatatisi inopesana nekushushikana kwemvura.
Muchidzidzo ichi, mhando gumi nemana dzeiyi tuber dzakaongororwa, pakati pavo paine Colombian Creole, Guaneña Creole, Latin Creole, Paisa Creole uye Galera Creole; zvipenyu zvakagadziridzwa uye zvakajairika zveUNAL Kudyara Chirimwa Chirongwa. Sekureva kwetsananguro yaVásquez, ivo vakasimwa pasi pemamiriro akajairwa uye kudiridza kwakamiswa kwemazuva gumi nemashanu kuti vaone kuramba kwavo.
Nekuda kweizvozvo, zvakaonekwa kuti mhando dzeCCC059, CC103, CCC116, CCC140 neCCC14 ndidzo dzaive dzisina kunyanya kushomeka, nekuti dzine hunhu hwakakosha muDNA dzadzo dzinovaita vanoshivira kushayikwa kwemvura. Tichifunga nezvakanaka izvi, Lina María López Contreras, Mudzidzisi muKurima Sayenzi yeGenetics uye Kudyara Kwezvirimwa UNAL, akavimbisa kuti "kutsvagurudza kunoisa hwaro hwakakosha hwezvirongwa zvekuberekesa munguva yemberi izvo zvinobvumidza kugadzirwa kwemarudzi embatatisi anoenderana nemamiriro ekushomeka uye ayo anogona kushandiswa varimi. vagadziri ”.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, kunyangwe hazvo genetisheni yekudzidzira kweCreole mbatatisi yatove kuitwa, UNAL inosimbisa kuti iyi ndiyo yekutanga kuitirwa kutsungirira kushushikana kwemvura Naizvozvo, chirongwa ichi chakaiswa sekufambira mberi kwakakosha, uko kunogona kuvandudza kugadzirwa kwezvirimwa zvembatatisi zveCreole uye kunomiririra mukana wekutarisana nemhedzisiro yekudziya kwepasi.
Nekuda kweizvozvo, mumatunhu eVentaquemada neChiscas, mhando gumi nembiri dzemapatata emadzitateguru dzakakura, dzaive padhuze nekutsakatika nekurasika mukukanganikwa. Nematambudziko aya, zvaikwanisika kusimbisa tafura yezvikafu zvinovaka inosimbisa basa reNative Treasure, uye dzinopfuura mhuri gumi dzine basa guru rezvehupfumi nekurima mbatatisi mudunhu iri. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, sekureva kweBazi rezvekurima nekusimudzirwa kweMaruwa, ichi chiitiko chinokudzwa nekununura mapoka makumi mana ematubhu, nekudaro achive muenzaniso unotungamira wekuchengetedza tsika.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista - Horaora.
/ nzvimbo / america /
Tags: Kuchinja Kwemamiriro ekunzekuomakusagadzikanakushomeka kwemvura
Kuvaka hwaro hwekutengesa mbatatisi dzeUS kuMiddle East
Snow pack ine Idaho, Washington varimi vembatatisi vane mvura yekudiridza yakakwana, izvozvi
Kutendeuka peji re2020 rakanaka kune varimi vembatatisi
MICROWAVEABLE RETAIL POTATO SEGMENT ANOONA KURAMBA KUKURA
HZPC: yakagadzirira kukura muNorth America